China EVA Foam Yakazadzwa Fender YeChikepe Kudzivirirwa fekitori uye vanotengesa | Haohang
EVA Foam Yakazadzwa Fender YeChikepe Kudzivirirwa
1.Ruvara. Dhizaini isingagone. 3.Can sedanda rekuyangarara pagungwa. 4.Flexible, mutengo-kuchengetedza. 5.Resains zvakazara kushanda kunyange kana ganda rakabayiwa. 6.Easy kuisa, kufamba uye kushandisa. Kuchengetedza kwakaderera.
Rudzi rwemhando iyi yevafenders
Eva furo yakazadza fender rudzi rweyakavaka fender ine polyurethane zvinhu senge yayo yekunze inodzivirira rukoko uye polyethylene kana epurasitiki furo musimboti inoumba inogadzikana yemukati chikamu.
Kuburikidza nekunyongana kunokanganisa kutora simba rinokanganisa chikepe kana uchishandisa. Zvekuti igone kudzikisira kukanganisa kune pier uye nengarava.
Polyurethane inoyerera fender zvakare iri mhando yekumanikidza fender iyo inovaka yekunze protecive rukoko pamwe polyurethan zvinhu uye adopts polyurethane achipupuma furo zvinhu kana mapurasitiki achipupa furo senzvimbo yepakati; zvinokanganisa pamadoko nezvikepe zvichave
yakaderedzwa necompression yekumhanyisa iro simba kubva kune ngarava mukati me uchishandisa polyurethane inoyerera fender.
Furo rizere vafambisi vengarava vanotora zvinokonzeresa apo ganda rinoramba kupfeka uye kubvarura mune chero mamiriro akaoma, nokudaro richipa rakaoma, rinorema-basa remumvura kufambisa masisitimu emahombekombe, ekumahombekombe uye kutumira-kuenda-kutumira.
3.Can sedanda rekuyangarara pagungwa
5.Resains zvakazara kushanda kunyange kana ganda rakabayiwa
6.Easy kuisa, kufamba uye kushandisa. Kuchengetedza kwakaderera.
Furo rizere fenders kuita kwakanyanya kuita uye rinorema-basa kuyangarara fender system.
Foam fender inogadzirwa neye polyurethane elastomer ganda (kana ganda rerabha), nylon yekusimbisa dura uye yakavharwa-sero inogadzikana furo.
Iyo ine yakakwira simba yekumwa uye yakaderera kuita simba.
Nei vatengi vachida kusarudza edu HAOHANG Zvigadzirwa?
1. Kukosha kweMari, iwe unowana iyo yakanakisa mutengo zvichienderana neakanakisa mhando.
2. Unrivaled Hunyanzvi, tinovimbisa yekutanga-chiyero chigadzirwa mhando uye sevhisi.
3. Hupenyu hwakanaka hwechigadzirwa uye garandi yemhando yepamusoro, zvigadzirwa zvedu zvine hupenyu hwakareba hwekushandira kwe10-15years.
Zvichakadaro, isu tine 3 makore emhando yewarandi nguva.
4. Nyanzvi mushure mekutengesa sevhisi. Isu tinobatsira vatengi vedu kugadzirisa chero zvigadzirwa zvigadzirwa mukati maawa makumi maviri nemana.
5. Sevatengi vedu, isu tinopa seti yekugadzirisa maturusi nemahara.
Pashure: Natural Rubber Mat neTire Machira ekugadzira Airbag
Zvadaro: Formwork Inflatable Balloons Concret Rubber Tube Kune Culvert
Mhepo dzeMahombekombe, China Rubber Fender, Tec Zvikepe, Rubber Fender, Ship Mhepo Bhegi, Wakaumbwa Block,